ရေစကြိုမြို့နယ် ပခန်းကြီးမြို့ဟောင်းထွက် မြေရေအိုးများ ရောင်းအား ပါးလာသဖြင့် မြေရေအိုးလု? - Yangon Media Group
ရေစကြို၊ ဇူလိုင် ၂၂
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ရေစကြိုမြို့နယ် ပခန်းကြီးမြို့ဟောင်းထွက် မြေရေအိုးများရောင်းအားပါးသဖြင့် မြေရေအိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများလျှော့နည်းလာကြောင်း မြေအိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများထံမှသိရသည်။ ယခင်က မြေရေအိုးလုပ်ငန်းကို ပခန်းကြီးမြို့ဟောင်းသက်ရွာတစ်ရွာလုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုခဲ့ကြသော်လည်း ယခုနောက်ပိုင်းတွင် မြေရေအိုးများကို ပြည် သူများအသုံးနည်းလာသဖြင့် မြေအိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများလျှော့ နည်းလာကြောင်းသိရသည်။
”မြေရေအိုးလုပ်ငန်းကအရင် လိုမတွင်ကျယ်တော့ဘူး။ အရင်ကဆို တစ်ရွာလုံး အိုးဖုတ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြတာ ခုတော့သိပ်မလုပ်ကြတော့ဘူး။ အိုးရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေက အရင်ကဆို မှာကြတယ်။ အရင်ကဆို လှည်းတွေနဲ့လိုက်ပို့ရတယ်။ တ ခြားမြို့ကြီးတွေကလည်းမှာကြတယ်။ အခုကတော့ အဲဒီလိုမှာကြတာမျိုးတွေလည်း မရှိတော့ဘူး”ဟု မြေရေအိုးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။ အဆိုပါမြေရေအိုးများရောင်း အားလျှော့နည်းလာ၍ မြေရေအိုး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူလျော့နည်းလာရခြင်းမှာ မြေရေအိုးများ နေရာတွင် ရေသန့်ဘူးများအစားထိုး ဝင် ရောက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”အိုးလုပ်ငန်းက အဆင်မ ပြေတာ လေး၊ ငါးနှစ်ရှိပြီဆိုတော့ တခြားလုပ်ငန်းတွေကူးပြောင်းလုပ် ကိုင်ရတာတွေနဲ့ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ တခြားဒေသတွေကို သွား ရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်”ဟု အိုးရောင်းသူဒေါ်သန်းကပြောသည်။ မြေရေအိုးများကို နွေဦးပေါက်ကာလများတွင် စတင်ရောင်းချရ ကြောင်း ရေသန့်ဘူးများအစားထိုး ဝင်ရောက်လာသဖြင့် ယခင်က လောက်ရောင်းအားမကောင်း ကြောင်း၊ မြေအိုးလုပ်ငန်းများတွင် ညောင်ရေအိုးအလှူရာသီဆိုလျှင် ပရိတ်အိုးများကို တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆိုများတွင် ရောင်းရ ကြောင်း သိရသည်။
တန်ဖိုးနည်း တိုက်ခန်းဝယ်ခွင့်ရရှိသူ ၈ဝဝ ကျော်ကို အခန်းများ မဲနှိုက် ရောင်းချတော့မည်
စစ်ကိုင်း၊ ရွှေဘို၊ မုံရွာနှင့် တန့်ဆည်မြို့ရှိ ဈေးကြီးများတွင် စားသုံးရန်မသင့်သည့် အစားအ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် ရွှေ့ပြောင်းခိုလှုံနေသူများ ပြန်လာနိုင်ရန် လဝက က ပုံစံများပို့ထား၊ ဆန္ဒရှိမှ
YBS ယာဉ်စီးခကို ကတ်စနစ်ဖြင့် ပေးချေမှု နောက်ထပ်ခြောက်လခန့် အချိန်ယူရဦးမည်
3 Girls ရုပ်ရှင်မှာ သူငယ်ချင်းက ကိုယ့်အပေါ်ကို သစ္စာဖောက်မှာကို မသိထားတဲ့ ရိုးရိုးကောင်မလေး တစ်??
စံချိန်တင် စပွန်ဆာ သဘောတူညီမှုအရ ပေါင်သန်း ၉၅ဝ အထိ ရီးရဲလ် ရရှိမည်